Ny fiovana amin'ny fiantsenana an-tserasera amin'ny mpivarotra antsinjarany | Martech Zone
Ny fiovana amin'ny fiantsenana an-tserasera miaraka amin'ireo mpivarotra antsinjarany
Alarobia, Martsa 11, 2015 Douglas Karr
Misy fiovana mitranga eo amin'ny fivarotana antsinjarany sy an-tserasera, saingy tsy azoko antoka fa misy olona mahatakatra tsara izay halehantsika. Ny fifaninanana mahery setra sy ny tolotra fandefasana maimaim-poana dia tsara ho an'ny mpanjifa fa mampandeha orinasa amin'ny orinasa ecommerce izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia mbola tia ny mpiantsena showrooming ary mahazo mikasika sy mahatsapa ireo vokatra tadiavin'izy ireo hovidiana.
Sakana iray hafa ho an'ny orinasa ecommerce madio ny fitomboan'ny isan'ny fanjakana mampihatra haba amin'ny varotra amin'ny orinasa ecommerce noho ny tsindry apetraky ny fivarotana antsinjarany. (Ity dia tena nahatonga ahy ho voafitaka… ilaina ny hetra hanohanana ny fifamoivoizana, ny fiarovana, ny afo, ny polisy, sns. Amin'ny fivarotana antsinjarany. Matetika ny orinasam-barotra dia tsy manatanteraka ny baikon'izy ireo amin'ny fanjakana iray ihany).
Ny fivarotana antsinjarany dia mety ho azo antoka kokoa noho ny tsapan'ny ankamaroan'ny olona, ​​manome efitrano fampirantiana sy toerana itaziana an'ireo mpiantsena maniry azy izao. Na izany aza, tsy misy isalasalana fa ny varotra an-tserasera dia manova ny fomba fanaovana asa. Ireo mpivarotra antsinjarany dia tsy maintsy manana fisian-tserasera mahavariana ahafahan'izy ireo manitatra ny tratrany hanoloana ny fifamoivoizana izay tsy azony miditra amin'ny magazay.
eCommerce dia fivarotana fivarotana vaovao. Noforoninay ity infographic ity mba hanomezana vahana ny tetikady momba ny dokam-barotra sy ny varotra izay indostria mahita ny varotra sy fahitana betsaka indrindra amin'ny antony mahatonga ny olona miantsena an-tserasera. Nisondrotra ve ny varotrao hatramin'ny nanovana ny fiantsenana an-tserasera? Na mety hitanao fa nihena ny varotra. Raha eo amin'ny sehatry ny fivarotana ianao na manolotra serivisy azo vidiana amin'ny Internet, ho anao ity infographic ity. Peter Koeppel
Ny infographic etsy ambany dia manondro ny isan'ny fivarotana antsinjarany mihidy raha mbola voatazona ny toerana malalaka. Ireo fivarotana antsinjarany dia mifindra avy eo amin'ny talantalana fitehirizana mankany amin'ny efitrano fampirantiana izay tokony hamarinina ny marketing sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Raha ny hevitro, raha manana fivarotana fivarotana na tranokala ecommerce ianao - fa tsy izy roa - dia mety handia fotoan-tsarotra ianao.
Koeppel Direct dia orinasam-pifandraisana mivantana misy fantsona marobe izay manana traikefa betsaka amin'ny fitantanana ny sasany amin'ireo fanentanana farany mitarika fahombiazana amin'ny fahitalavitra.
Tags: ecommercefironana ecommercekoeppel mivantanapeter koeppelantsinjaranyfironana fivarotana
Fotoana fametavetana momba ny orinasanao (Aza adino ny ahy)